Jason Falls ny lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jason Falls
Jason Falls dia SVP ho an'ny tetikady nomerika ao fihenjanan'ny resaoro, orinasam-barotra nomerika misy birao any St. Louis, Chicago ary Louisville. Mpanoratra boky roa momba ny marketing nomerika izy, mpandaha-teny matetika momba ny lohahevitra ary mpandinika teknolojia sosialy. Mifandraisa aminy amin'ny jasonfalls amin'ny ankamaroan'ny tambajotra sosialy.
Alarobia, Aprily 6, 2016 Alarobia, Aprily 6, 2016 Jason Falls
Ny tranokalan'ny fikarohana asa dia ampolony am-polony. Betsaka tokoa amin'izy ireo no manandrana manavaka ny tenany aza ny sasany amin'izy ireo amin'ny filazany fa, "the eHarmony" ho an'ny asa. Araka ny voalazan'ny Dr. Neil Clark Warren, mpanorina ny eHarmony, "Tsy izy ireo." Ankehitriny ny orinasany dia manana vokatra ara-dalàna hanaporofoana an'io ary tena marani-tsaina sy be pitsiny noho ny heverinao azy. Warren sy ny ekipan'ny vokatra dia nanangana kariera avo lenta avy amin'ny eHarmony in